Umnxeba wehlathi: Indawo yokuhlala enomtsalane enombono
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguFarouk
UFarouk unezimvo eziyi-127 zezinye iindawo.
I-villa ekhethekileyo kwiindawo eziphakamileyo zeRaf Raf. Le ndawo yokuhlala ingahlala abantu abayi-16. I-villa ifumaneka kwihlathi laseRaf Raf kude nengxolo kunye nongcoliseko lwesixeko. Ubume bayo bunika umtsalane okhethekileyo. Iintsapho ezi-4 zihlala apho kwii-bungalows ezi-4, ezinebhedi enye ephindwe kabini kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga. Igadi inkulu kakhulu kwaye ichibi lokuqubha lamanzi olwandle lingafudunyezwa ebusika. Ukuba ufuna ukuhlala ngoxolo uphefumla umoya ococekileyo, le ndawo yokuhlala yeyakho!
Igadi enkulu kakhulu enekheji yebhola, i-hammock, i-lawn enhle, i-pool yokubhukuda yamanzi olwandle enokufudumeza ebusika. IGadi ineprojektha enkulu kakhulu, efanelekileyo kwimisitho
Ikhitshi langaphandle elixhotyiswe ngokupheleleyo, linebha, itafile ephezulu, ioveni yepizza, ibbq
Kwinqanaba legadi sinee-bungalows ezi-2:
1) I-Forest Suite: yenziwe ngebhedi ephindwe kabini, iibhedi ezi-2 ezongezelelweyo, ifriji kunye negumbi lokuhlambela. Ngaphandle kwale suite kukho iterrace enetafile ezi-2 ezinokuhlala abantu abalishumi.
2) I-Suite etyheli: Yenziwe yibhedi yabantu ababini, iibhedi ezi-2 ezongezelelweyo, ifriji kunye negumbi lokuhlambela.
3) IJeliz Suite: yenziwe ngeebhedi ezimbini eziphindwe kabini, ifriji kunye negumbi lokuhlambela kabini.
4) I-Majestic Suite: Yenziwe yibhedi yabantu ababini, iibhedi ezi-2 ezongezelelweyo, ifriji kunye negumbi lokuhlambela.
I-villa ibekwe kwiindawo eziphakamileyo zehlathi. Ukuze ufikelele kwi-villa, kufuneka ube ne-4x4. Ngaphandle koko iindwendwe kuya kufuneka zishiye iimoto zabo kwindawo yokupaka ezantsi kwe-villa kunye nehashe lethu "Khazri" liya kubathwala kumqeqeshi wakhe.
Umbuki zindwendwe ngu- Farouk
Ndisasebenzisa abakhenkethi ukubanceda bahlale kakuhle
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$563
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rafraf